नेपालमै पहिलो कोभिड बिरामी देखिएपछिको एक वर्षमा हामीले के गर्यौं ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
नेपालमै पहिलो कोभिड बिरामी देखिएपछिको एक वर्षमा हामीले के गर्यौं ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २९ पुष बुधबार १९:०४
टेकु अस्पतालमा अझ भनौं नेपालमै कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो बिरामी भर्ना भएको आज एक वर्ष पुग्यो । कोभिड-१९ महामारीमा यो एक वर्ष थकान, तनाव, डर नभनी खट्ने मेरा सबै सहकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी एवं सहयोगीलाई नमन गर्न चाहन्छु ।
कोभिडबाट जीवन गुमाउनु भएका आमा-बुबा, दिदी-बहिनी-दाजु-भाइमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु । हरसम्भव कोसिस गर्दा पनि बचाउन नसकेका बिरामीका आफन्तको वियोग र निको भएर घर फर्किनेहरुको मुस्कानको बीचमै यो एक साल बित्यो ।
सुरुवाती दिनहरुमा नेपालमा कोभिड भित्रिँदै गर्दा स्वास्थकर्मीमा त्रास र अस्पतालहरुमा भ्रम थियो ! संक्रमितहरु टेकुमा मात्र जान्छन् ! फलस्वरुप कोबिड महामारी आउनुपूर्व नै अन्य बिरामीका लागि अस्पतालका ढोकाहरु बन्द भए । कसैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिए अस्पताल नै सिल हुन्थे । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै दिन थकान नभनी बिरामीको सेवामा जुटिरहने टिमको ऊर्जा आजसम्म घटेको छैन।
सरकारी अस्पतालले जागिर मात्र सोच्ने, जिम्मेवारी बिर्सिने अनि साधन-स्रोत भएता पनि , त्यसअनुसार बिरामीले सेवा नपाउने । त्यस्तै, निजी अस्पतालले नाफा मात्रै सोच्ने, जिम्मेवारी बिर्सिने, राज्य बाट छुट लिने , अनि राज्य ले तोके अनुसार सेवा नदिने। यो यथार्थ देखियो, यसमा को बढी र को कम भन्ने मात्रै हो ।
हाम्रो अवस्था यस्तै छ, त्यसैले कृपया लापरबाही नगरौं । आफू बचौं, अरुलाई पनि जोगाऊँ । अझै पनि हामी महामारीको भुँवरीमै छौं । सबैतिर खुला छ । हामीले महामारीमा अपनाउनुपर्ने सबै मापदण्ड मिचिसक्यौं । अस्पतालमा बिरामीको चाप घटे पनि सिकिस्त बिरामी आउने क्रम जारी नै छ !